MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA BLACK MOUTH CUR DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Black Mouth Cur Dog
Nani Afka Madoow ee 9 bilood jira— Iyadu waa ey eey kalsooni badan uqabto gabadhan yar. Ma ahan madaxnimo, wax uun kama baqaan. '
Liiska eeyaha Afka Madoow ee Isku Darka ah
Afka Madaw ee Maraykanka
Bariga Teksas Cur
Bariga Texas Brindle Cur
Afka Madoow Cas
Afka Madaw ee Koonfurta
Af Jaale Madoow Cur
Afka Madow ee loo yaqaan 'Black Mouth Cur' waa eey murti adag, adag, oo eey adag oo reer Koonfureed ah. Koodhku wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan oo huruud ah, fawns iyo brindle. Qaar ka mid ah BM Curs waxay ku dhashaan jaakado culus qaarna waxay ku dhashaan jaakado qafiif ah labadan nooc ee jaakadaha kala duwan waxay ka muuqan karaan isla qashin. Afka aan la dafiri karin ee xoog leh waa madow, midab buluug ah ama midab la mid ah jaakadda. Muzzles madow ayaa badanaa la doorbidaa midab kale oo kasta waxaa loo tixgeliyaa qalad. Dhegaha waa dhexdhexaad oo wey laalaadeen. Dabada ayaa aad u dheereyn karta. Qaar badan baa ku dhasha dabada oo gaaban ama ay ku xirtay. Laabta ayaa qoto dheer oo adag.
Dadka ugaarsada, eey kale ma sameyn doono. Kawaankan dhaqsaha badan ee laga qodayo waxaa ka mid ah boor, bear, coon, squirrel iyo deerada. Cayaar dhexdhexaad ah, Afka Madow ayaa qabta oo dilaa iyada oo aan wax su'aalo ah la weydiinin. Eygan dib ugama laaban. Sidoo kale waxay ku xeel dheer tahay geedaha iyo geedaha. Inta lagu jiro ugaarsiga, dabagalka ayaa ah mid furan ama aamusnaan leh, oo la jarjaray ama yodel laga aqbali karo geedka ama hareeraha. Habaarradu si dhif ah ayey u tumaan, xitaa inta ay ugaarsanayaan, socodka ka dib illaa orod dhulka ku daboolaya. Eeyahaani waa kuwo jecel ugaarsadayaasha , haddana sidoo kale way la shaqeyn kartaa lo'da . Bixiyeyaashu waxay yiraahdaan cunug ayaa iskiis u tababaran doona dhirta, ilaalinta iyo / ama faragelinta iyo qalinka lo'da lix bilood jir. Isaga oo ah mid aan naxariis lahayn oo awood badan maadaama curyadan ay ka muuqato shaqada, isagu waa naxariis badan yahay waana ilaalinayaa qoyskiisa. Daacadnimada iyo baqdin la’aanta ayaa caado ah. Waxay leeyihiin rabitaan gubasho ah oo ay kaga farxinayaan sayidkooda. Ku wanaagsan carruurta, noocani wuxuu u baahan yahay milkiile mashruuc sameeya a maamulka dabiiciga ah eyga dushiisa. Mulkiiluhu waa inuu deji xeerar eygu waa inuu raacaa oo ku dhegaa iyaga. Waa inay ahaadaan kuwo adag oo aan qallafsaneyn, harsan deggan oo kalsooni leh . Eyga waa in lagu qanciyaa inuu ka hooseeyo aadanaha sida ay isugu xigaan. Aad ayey muhiim u tahay in eeygan uu maalin kasta helo jimicsi maskaxeed iyo mid jireed. Inkaaraha jimicsi la'aantu waxay noqon karaan kuwo culus oo xamaasad leh. Markaan laga shaqeynin ugaarsiga waa in loo qaadaa socod maalinle ah halka ay joogaan cirib ku dheji ama gadaal mulkiilaha , marna hore sida hogaamiyaha xirmada ayaa marka hore taga. Caqli badan, la saadaalin karo, oo leh xitaa dabeecad, Habaarka Koofureed ayaa daacad u ah qoysaskooda, iyagoo nafahooda siinaya, haddii loo baahdo, si loo ilaaliyo. Bilow tababarka Afka Madow ee isla marka aad guriga keento. Kulamada tababarku waa inay noqdaan kuwo kooban oo isdaba joog ah si looga ilaaliyo inay caajisaan. Eygan shaqeeya ma aha in lagu kalsoonaado xayawaanka aan xayawaanka ahayn .
Dhererka: 16 - 25 inji (40 - 64 cm)
Miisaanka: 45 - 95 rodol (20 - 43 kg)
5 wiig jir puppy puppy
Afka Madoow Maaha xulashada ugu fiican nolosha guriga.
Afka Madow eeyga waa eey ugaarsi ah oo u baahan jimicsi ballaaran oo joogto ah, oo ay ku jiraan a socod dheer oo maalin kasta socda . Eeyahaani waa kuwo aad u caqli badan, xitaa socod dheer oo maalintii hal mar ah kuma filna inay mashquuliyaan. Waa eey aad u jir jir ah, ilaa uu dareemo carruurta jilicsan ama haweenka mooyee. Wuxuu ubaahan yahay qol badan oo uu ku ordo. Waxay sida ugu fiican ugu shaqeeyaan guri leh deyr weyn oo ay ku ilaashadaan. Waxay samaystaan ​​saaxiibbo orod badan. Jimicsi la'aantu waxay sababi kartaa dhibaatooyin dhaqan oo kala duwan.
Qiyaastii 12 ilaa 18 sano
dibi bunni iyo caddaan ah
Timaha gaaban ee Afka Madoow ee Curiska ah way fududahay in la xafido. Mararka qaarkood shanlee oo caday si aad u saarto timo dhintay iyo kuwo dabacsan. Maydho oo keliya markii loo baahdo maadaama maydhashadu qallajin karto maqaarka, taasoo sababi karta dhibaatooyin maqaarka ah. Ka ilaali kanaalka dhegta timo xad dhaaf ah ciddiyaha ciddiyahana la jaro.
waa maxay alaskan klee kai isku dhaf ah
Koonfurta Mareykanka waxaa si fiican ugu nool eyda nooca cur-ka ah oo ay adeegsadaan ugaarsadayaasha maxalliga ah iyo cayaartoydu. Waxay ahayd Afka Madoow ee doorka Old Yeller ka ciyaaray filimka caanka ah ee Disney movie.
ABMCBA = Ururka Midawga Afrikada Madow ee loo yaqaan 'Black Mouth Cur Breeders Association'
FBMCBO, Inc. = Ururka Aasaasiga ah ee Afka Madow Curreed Organization, Inc.
NSBMCBA = Ururka Dhalinta Koofurta Madow ee Afka Bulshada
SBMCBA = Ururka Midawga Afka Madow ee Koofiyadaha Madoow
Moonpie the Lakner Yellow Black Mouth Cur kaynta.
Jiido Afka Madoow ee qiyaastii 1 ½ sano jir ah
Bailey the Black Mouth Cur at 2 sano jir— Waxaan ka badbaadiyey quruxdan Bailey bulshada bina-aadamka ah ee ku nool Colorado Springs. Waxay ka soo wareejisay New Mexico. Aniga oo aan ogeyn waqtigaas nooca ay tahay, ayaan arkay wejigeeda macaan oo aan jeclaaday. Waxay bilowday inay aad u noqoto burbur iyo cabsi badan wax walba laakiin leh jacayl badan iyo tababarka wey heysataa loo rogay eeyga ugu fiican iyo saaxiibka ugu fiican ee daacad ah! Si caqli badan oo had iyo jeer doonaya inuu ku farxo. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan iyada haysto noloshayda.
'Kani waa Tucker, Afka Madoow ee Madoow, kana socda Khadka Carnathan. Tucker waa arday jecel oo tamar badan leh. Waa lama huraan inuu yahay socday maalin kasta . Sidaan isaga u soconno, waligiis safar dheer ma aado oo had iyo jeer waa la arkaa. Waan la shaqeyneynaa isaga edbinta sheegashada . Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyahayaga kale, laakiin wuxuu leeyahay a shakhsiyadda xukunta . Isagu waa qof aad u dhiirrigeliya cuntada wuxuuna yaqaanaa sida loo fariisto, loo joogo, loo jiifo, loo fadhiisto lugaha gadaashiisa iyo gurguurta. Tucker waa koolkoolin! '
Buck The Black Af Cur Cur
Magaca: Toddoba Lafood Keeton. Taranka: Afka Madoow ee Cur. Da ': 4 sano jir. Ficil: Geed kor u fuulay caraf udgoon.
Brindle Afka Madoow Cur
Brindle Afka Mad Cur eey
Nani Afka Madoow ee Curyaanka ah 9 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo ah Afka Madoow ee Cur
Afka Madoow Cur Sawirada 1
Afka Madoow Cur Sawirada 2
isku darka sheybaarka chihuahua oo koray